ရှိတာလေးနဲ့ လင်းအောင်ပေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ရှိတာလေးနဲ့ လင်းအောင်ပေး
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on May 24, 2012 in Society & Lifestyle | 42 comments
မီးအကြောင်းကတော့ လူတကာပြောလို့ စုံတကာစေ့နေပါပြီ..။
ဒါကြောင့် ဘယ်နားက၀င်ပါရကောင်းမလဲလို့ အကွက်ခြောင်းနေတဲ့ ဦးပါလေရာတယောက် အသာလေးဘေးကပ်နေပါ့မယ်..။
သတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတာ မီးလူကြီးတွေက မီးအပြည့်မပေးနိုင်တာကို တောင်းပန်သတဲ့ မေတ္တာရပ်ခံသတဲ့ ဖြောင့်ဖျသတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ထွန်းဘို့ အကြံပေးသတဲ့…။
အဲတာဆို ကျုပ်က ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကုန်ရင် ကညင်ဆီလေးတွေ ဆက်ထွန်းဘို့
ကညင်ဆီလေးတွေကုန်ရင် ကြက်ဆူဆီလေးတွေ ဆက်ထွန်းဘို့ အကြံတွေကို ပေးပစ်လိုက်ဦးမှာ..။
ကိုင်း… ကိုင်း… စိတ်ကူးယဉ်တာရပ်တော့ ပါလေရာ…။
မင်းကိုလဲ ဘယ်သူမှ မီးလူကြီးမခန့်ပါဘူး..။
အဲဒီတော့ ဒီလောက်တောင် ဆရာလုပ်ချင်မှဖြင့် ပြည်သူကိုတော့ ဆရာလုပ်ဘို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့..
အဲဒီ မီးလူကြီးတွေကိုသာ အာသာပြေအောင် ဆရာလုပ်ပေတော့…..။
ခင်ဗျားတို့က လျှပ်စစ်မီးလေးမလောက်တာကို မိုးနတ်မင်းကြီးကိုသာဆုတောင်းပါတို့ ၊ မရှိလို့မပေးနိုင်တာ အပြစ်ပေးရင်ခံပါမယ်တို့ လျှောက်မျက်ရည်ခံထိုးနေတော့
နေပါဦး – ခင်ဗျားတို့က ဘယ်ဘုံက ယူအက်ဖ်အိုစီးပြီး ဆင်းလာတာမို့လို့ မလောက်တာလေးကို အဆင်ပြေအောင် မဝေနိုင်ရတာလဲ..။
ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ တသက်လုံးနေလာတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာများ လောက်လောက်ငှငှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုပိုလျှံလျှံရှိဘူးလို့လဲ..။
မလောက်ရင်လဲ အဝေတဲ့အောင် မျှသုံးကြရမှာမဟုတ်လား..။
ဥပမာလေး တခုထဲ တိုရေရှားရေ ပေးကြည့်ပါရစေ
(တခြားနည်းလမ်းတွေတော့ စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်)
မီးမလောက်ပါဘူးဆိုပြီး ခြောက်နာရီ ဆက်တိုက်ဖြတ်ပစ်တာနဲ့စာရင်-
နှစ်နာရီဖြတ် ခြောက်နာရီပေး လုပ်ရင်-
မီးလာရမယ့်အချိန်မှာမီးလာဘို့ တိတိကျကျ အာမခံနိုင်ရင်
ဘယ်လောက်ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်သလဲ …. ????
ဦးပါ မီးအကြောင်းတော့ မောလို့ မပြောတော့ဘူး။ မန်းလေးမှာ အခု လာချိန်ကို အပြည့်လာနေပြီး ပျက်ချိန်လည်း အတိအကျပျက်တယ်။ ရေလည်း မရတဲ့နေရာတွေမှာ ရေပေးရေက လာနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ တချို့ ပြောတာကတော့ အမှန်ရေကို မီးစက်နဲ့ တင်ပေးရမှာ အထက်က ဆီပေးပြီးသား အောက်က ရောင်းစားပြီး မီးစက်မနှိုးလို့ ဒီလောက်ကသီကုန်တာလို့ ပြောတယ်။ ခုလိုပေးတော့လည်း ရေက လာပါတယ်။ ပေးလို့လည်း ရသားပဲ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းတော့ နေသာ အသက်ရှုချောင်သွားတာပေါ့။ လေးပေါက်တို့ တိုက်ခန်းတွေ ဘက်တော့ မပြောတတ်ဖူး။
သူတို့ကလဲ သူတို့ pooch ရဲ့..
ဖရောင်းတိုင်တွေ ဆက်ထွန်းမယ့်အစား အဲဒီမသမာမှု့တွေ တယောက်တပေါက်ဖေါ်ထုတ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်..။
နေပူတော်ကိုလည်း နည်းနည်းလျော.ရင်ကောင်းမယ် ။
အခုတော့ စလျှော့တယ်လို့ ပျဉ်းမနားဘက်က မိတ်ဆွေကပြောတယ်။
အမှန်သိရအောင် ရွာစားကျော်ကို မေးကြည့်မှပဲ..။
၂နာရီ ပျက် ၆နာရီ လာ ဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၂နာရီစောင့်နိုင်ရင် လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လျှပ်စစ်နဲ့ ဆက်လုပ်ခွင့်ရမှာပေါ့ ၊
ကြား၂နာရီလောက်ကတော့ တစ်ခုခု လုပ်ရင်းစောင့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ အဲဒါပါ မပဒုမ္မာရေ
ဝေသုံးရမယ်ဆိုလဲ ပိုကောင်းအောင်ဝေလို့ ရပါတယ်။
ပညာတတ်လို့ယူဆရမယ့် အုပ်ချုပ်သူဟာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ မိုးနတ်မင်း ကို ဆုတောင်းခိုင်းတာဟာ ရိုင်းလွန်းပါတယ်နော။ နောက်များဆိုရင် ဆရာဝန်မလောက်လို့ သားဖွားကိတ်စမျိုး ပြည်သူက အော်ခဲ့ရင် အင်္ဂလိသုတ် ရွတ်ခိုင်းမယ့်ပုံဘဲဗျို့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ် စစ်သားတွေ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ကတည်းက ပြောနေကျစကားကတော့-
တစ်ချို့ကို စိတ်မှန်းနဲ့ ထင်ရာတွေးပြီး အတော်လေး ဓာတ်ကျသွားလို့ စိတ်ငြိမ်ဆေးသွင်းလိုက်ဦးမယ် ကိုပါရေ။
အရှုံးပေး နှလုံးအေး တဲ့ဆေး ဆိုတာ တကယ်တော့ ပြောတော့သာလွယ်တာကလား။
အခုတော့ ဒီအထုပ်ကြီးက မနိုင်နိုင်အောင်ကြီးလာတာပေါ့ မခင်လတ်ရယ်..။
ပိုဆိုးတာက အဲဒီအထုပ်ကြီးကို ခုတုံးလုပ်ဘို့အကွက်မြင်သူတွေလဲ ရှိသပေါ့…
ဧရာဝတီမြစ်သည် တရုတ်ပြည်ဖက်ကနေ ဆင်းလာမှဒေါ့ အခြားနိုင်ငံဂ ဝင်လုပ်လို့ ရပါ့မလား သဂျီးယဲ့..။ ဒီကိစ္စဂ စီးဗွားယေးသက်သက်တင်မက မဟာဗျူဟာမြောက် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ယေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား စုန်းဖြတ်ချက် ချဖို့ဘဲရှိဒယ်။ လုပ်ရင် ကြေးမုံဂျီးအမျိုး ငါ့ဖို့ဒဂိုဂေါင်းသမား တရုတ်ကြီးလက် ဝကွက်အပ်၊ မလုပ်ဖူးဆိုယင် တိုင်းပြည်လုံခြုံရေး မဟာဗျူဟာမြောက် အရင်းအမြစ်ကို အကြောင်းပြ လုံးဝငြင်း..။ နို့မို့ရင် တရုတ်ကြီး မြစ်ညှာကနေ သေးပေါက်ချလို့ တဒိုင်းဒပြည်လုံး ရေဘေးကပ်ဆိုက်ကုန်မည်။
တခြားအကြောင်းအရာတွေတော့များများမသိပါဘူး။ မြစ်ဆုံကိုချစ်တာပဲသိတယ်။ အတုဆိုတာ
မြစ်ဆုံကတော့ ပြန်လုပ်ဘို့မလွယ်တော့ပါဘူး.. လွန်ကုန် ကျွံကုန်ပါပြီ..။
ပြီးတော့ သူက ဧရာဝတီလေ…။
ပြီးတော့ အဲဒီမှာလုပ်လို့ရလဲ ထွက်တဲ့လျှပ်စစ်က ပြည်တွင်းသုံးရမှာမှမဟုတ်တာ…။
ဒါပေမယ့် မြစ်ဆုံကို မလုပ်ရတိုင်း ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာပါ မလုပ်ရလို့တော့မဖြစ်ဘူး…။
သူကြီးတို့ များ ပွဲခလဲမရ။ဆဲလဲ အဆံခံဖို့ ရယ်ဒီလုပ်ထားတဲ့ပုံပါလား။
အင်း. သူကြီးပြောပုံဆိုရင်တော့ KIA ကိုကြောက်လို့ မြစ်ဆုံပြန်စ ရမယ့်
လုပ်လာလိုက်တဲ့ ရေအားတွေက လဲခုထိကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။မယုံတော့
တာ လက်တွေ့ ပါဗျ။ဆယ်နှစ် စီမံကိန်းနဲ့ ၂၀၀၃လောက်က ဘဲ စလုပ်နေ
တာ ခုလက်ရှိချိန်ထိ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြီးတဲ့ သူဌေးချောင်း စီမံကိန်း
မြစ်ဆုံဆက်လုပ်ဖို့က လောလောဆယ်မှာတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ နောက်အစိုးရသက်တမ်း တစ်ခုမှာတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံမလုပ်ခိုင်းမချင်း ပြည်သူတွေကို မီးအပြည့် မပေးဖို့ မဟာဗျူဟာချထားသလားဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး။ သူတို့တွေ ပြောတဲ့အာဘော်က မီးအသုံးပြုမှုတိုးတက်လာပေမယ့် မီးထုတ်လုပ်မှု တိုးမလာလို့ မီးအလုံအလောက် မပေးနိုင်တာ လို့ နှပ်ကြောင်းလေး ပေးထားတာကိုးဗျ…။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇ် မီဒီယာ အ၀ဲယားနက်ဇ်တော့ ရလာဘီ…
ခွီးတဲ့မှ … လူမရှိတဲ့ ၈လမ်းသွားမှာ မီးထိန်ထိန်ငြီးနေပီး
လူသန်းချီတဲ့မြို့တွေ ကို ဖျောင်းတိုင်ထွန်းထား ကောင်းသွားမှာပါ တဲ့
ပြောလည်း ပြောထွက် ပြောရက်ပါပေ့…..
ညည်းတို့ သဒင်းစာမှာ သာ အလျှံပါယ်ထွက်တာပါအေ…
သူများတိုင်းပြည်က မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ
လူတွေ ဖတ်ဖို့ အလကား ကပ်ပေးထားတဲ့ သဒင်းစာတွေမှာတော့
လူတွေ လမ်းပေါ်မှာ ဖျောင်းတိုင်ထွန်းတဲ့ ပုံတွေချည်း တင်ထားတော့တာပဲ..
ဟိုကောင်မလေး ရေးသလို ရေးလိုက်ပါဦးမယ်…
မီး လေ …မီး …
ဇော့်ကို ရွေး ရမလား ကိုကို့ကို ရွေးရမလား …
လမ်းလောက် ထွန်းတာထားတော့ ဂီဂီရေ
အခုမှပဲ ကမ္ဘာသိ အရှက်ကွဲတော့တာပဲ…
လောလောဆယ်တော့ မီးရေ လာသင့်တဲ့အချိန်လာနေပါတယ်။
မီးနဲ့ရေက ကျနော်တို့က တစ်လကြီးများတောင်အကြွေးပေးထားလို့ပါ.
ရန်ကုန်မှာလဲ လာရမယ့်အချိန်လေး မှန်သွားတယ် ကိုပေါက်ရဲ့..
အဲဒီလိုဆို မီးလူကြီးက နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း တောင်းပန်နေရမှာကို တွေးပူမိတယ် ဦးပါရယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မီးကတစ်နှစ်လာလည်း ဒီပုံစံ မပြောင်းလဲဘူး၊ နောက်တစ်နှစ်လာလည်းဒီပုံစံ မပြောင်းလဲဘူး၊ ပြတ်တစ်လှည့် မလာတလှည့်ပါဘဲ မီးရယ်။
နောက်နှစ်မှာ အပြီးသတ်မယ့် (လျှပ်စစ်ထုတ်လို့ရမယ့်) စီမံကိန်းလဲ လုံးဝမရှိဘူးနော်…
အခုတော့ မီးစက်တွေနဲ့ လက်ပူတိုက်နေပြန်တယ်။
သမီးလုပ်သူက တပည့်တော်မ ပြန်ကြွပါဦးမယ်…
ဆိုလို့ မအေကိုတိုင်တော့ အမေလုပ်သူက…
ဒီကလေးမ အမိန့်ရှိလိုက်ရင် ဒီလိုချည်းဘဲ ပြောသတဲ့…
ဒါနဲ့ ဘုန်းဘုန်းလဲ ဒကာကြီးကိုတိုင်သတဲ့…ဒကာကြီးက
အဲ့ဒီသားအမိကို ကျောင်းဝင်းထဲ ခြေတော်ရာ မချစေနဲ့တဲ့လေ…
နောက်ထပ်တော့ နောင်ကျဉ်သွားလောက်ပြီထင်ပါတယ် မအိရယ်
နောက်ဆို လူကြီးတွေ လူရှေ့ထွက်ရင် ပါးစပ်လေးတွေတင်းတင်းစေ့ထားကြမှာ မြင်ယောင်သေး….:D
တစ်ချက်တည်း ဘယ်သူမှလည်း ဟို…
လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာ ခွဲတမ်းတွေရှိနေဦးမှာပါ ( အထင် )
အခြေနေကိုအသုံးချပြီး ခွဲတမ်းတွေကို ဝါးနေတဲ့ကောင်တွေအကြောင်းပေါ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား
ပြည်သူတွေ ဆုံးရှုံးမှု့ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးမြင်သာလာသပေါ့
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သူများနိုင်ငံတွေနဲ့တွက်ပြီး စက်ကရိယာတွေမပြည့်စုံပါဘူးဘာညာပြောပြီး
ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေနေနဲ့ တကယ်လုပ်ပေးရင် တစ်အိမ်ထောင်ဖုံးတစ်လိုင်းကတော့
ခင်ဗျားတို့က လုပ်ချလိုက်ရင် အကြီးကြီးတွေချီးဘဲ
သဂျီးပြောတဲ့ နတ်ပြည်နဲ့မြှောက် ငရဲနဲ့ခြောက်ဆိုသလို
ကမ္ဘာစစ်ကြီးကို အဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်တွေ စက္ကူတွေနဲ့လုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေဘဲ
ကျုပ်မှာ လက်တွေ့ ပြစရာနမူနာတခုကို ရှိတယ် ကိုအောင်ပုရေ….
လူတယောက်ကို မီတာနှေးအောင်လုပ်ပေးပြီး ရံပုံငွေရှာသွားတယ်။
ပြီးတော့ ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ မီတာအရမ်းမနည်းစေနဲ့- များများသုံးပေး….တဲ့
သူ့ခမျာ လိုလိုမလိုလို များများသုံးနေရရှာတယ်။
အင်း… ခင်ဗျားပြောသလို အောလပုံပဲ…….
မီး ရဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေက extension တောင်းထားတယ်….
မီး ရဲ့ ….. ဦး ..။
အဲဒီ မီးလူကြီးသာ ရွာထဲဝင်လာမိရင် ရူးသွားနိုင်တယ်..
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ သူ့ ထက်နားလည်တဲ့ မီးလူကြီးတွေ ရွာထဲမှာ အတော်များလို့ဟိုဟာလုပ်ရမလိုလို..ဒီဟာလိုက်လုပ်ရမလိုလိုနဲ့ 
နောက်ဆုံး မီးမှောင်မှောင်မဲမဲမှာ မောင်မောင်မီး မူးဟူးဟူးလို့ ..တွားရှာပါဘီလကွယ်..
ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး.. မီးလူကြီးတွေရဲ့ အဖြစ်ကို တွေးကြည့်ဒါဘာ တိုတိုပါရဲ့
အဲဒီမီးလူကြီး ဒီရွာထဲမလာလောက်တော့ဘူး ဗိုက်ကလေးရဲ့
မီးမလာလို့ ရေမရှိတာလား… ရေမရှိလို့များ မီးမလာတာလားဟင်… ရှိတုန်းက ချွေတာ သုံးကြပါလို့ ပြောသားပဲ…
သူတို့က သူများကိုသာ ချွေတာခိုင်းတာ မနောရဲ့..
မနောလဲ နေပူတော် ခဏခဏရောက်နေတော့ လက်တွေ့ပဲမဟုတ်လား..။
ဦးဦးပါလေရာကလဲဇွတ်ပဲ…အဲဒီရှိတာလေးက…နေပြည်တော်အတွက် အရံထားထားတာ..သူတို့အစဉ်အဆက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့..အဘတွေက နေပြည်တော်မှာရှိနေသေးတယ်လေ..မီးလူကြီးတွေအိမ်မှာ ဘုရားစင်တောင်မရှိဘူး၊ အဘစင်ပဲရှိတယ်။
မီး ပြန် မှန်တော့မယ့်သဘောပေါ့ခင်ဗျာ…။
မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့လို့ အော်ရုံသာ ရှိတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ။
အခုကြားရတာတော့ ဂျူလိုင်မှ တဲ့
ပြည်သူတွေဖက်ကလည်း ချွေတာလို့ရတဲ့နေရာမှာ ချွေတာသုံးပေးကြစေချင်ပါတယ်။
ဥပမာ နေ့လည်တွေမှာ မလိုအပ်တဲ့မီးချောင်းတွေ ပိတ်ပေးပါ။
ရုံးဆင်းရင် ပန်ကာ၊မီးချောင်းတွေ ပိတ်သွားကြပါ။
သဘာဝလေနဲ့နေလို့ရတဲ့အခါ ပန်ကာ၊အဲကွန်းတွေ ပိတ်ပေးကြပါ။
အိမ်သာကထွက်ရင် အိမ်သာမီးတွေ ပိတ်သွားကြပါ။
ငါတို့မီတာခပေးထားတာပဲ သုံးမှာပေါ့ဆိုတာမျိုး၊ ဒီမီးလေးသုံးတာ၊ဒီ တစ်အိမ်သုံးတာ ဘယ်လောက်မှ
ကုန်သွားတာမဟုတိပဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဖျောက်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ် မီးတွေထိန်အောင်သုံးနေတဲ့ အချိန် ဟိုဖက်ရပ်ကွက်က ကလေးက ဖယောင်းတိုင်နဲ့ စာဖတ်နေရတယ်ဆိုတာ သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်ဟာ ကိုယ့်အသိတရားရေချိန်ကို စမ်းစစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ပါ…။
မီတာခ ပေးနိုင်တိုင်း သုံးလို့မဖြစ်ပါဘူး…။
ဦးပလာယာရဲ့ အဲ့ဒီတော်ကီကိုတော့ ရေလည်ခိုက်သွားပြီ…
ပိုပိုလျှံလျှံလေးတွေ မဖြစ်သွားအောင် အစိုးရက စေတနာနဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းရယ်.. မီတာခရယ်… ဖုန်းဖိုးတွေရယ်…
အားလုံးကို ဘက်ညီပြီး ပြည်သူ့ ၀င်ငွေ မိုင်းနက်ပြအောင် လေ့ကျင့်ပေးထားပါတယ်…
ပြန်ရင် တရုတ်ဘက်က ၀င်တဲ့ LED လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလေး ပြေးဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ…
ဒီပိုစ့်မှာ ကွန်မင့်ပေးသူများကို တဦးချင်း ပြန်လှန်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ ထပ်ပြောချင်တာလေးတွေ ထည့်ထည့်ပြောသွားဘို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်နိုင်တဲ့အချိန် မီးပျက်နေလို့ ကွန်မင့်တွေကို laptop နဲ့ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ (အဲဒါကြီးနဲ့တော့ ကျုပ်က စာမရိုက်တတ်တာအမှန်)
အခုမှတော့ ကြာသွားပြီမို့ ကွန်မင့်ရေးဆွေးနွေးကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်း လိုရင်းလေးပဲနဲနဲချုပ်ပြောပါရစေတော့-
၁-လောလောဆယ်မီးမလောက်ဘူးဆိုတာ အရမ်းကြီးမလောက်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ၂၀-၂၅% လောက် လျော့တာပါ။ အခုထက်ပိုပြီး စံနစ်ကျအောင် မျှအောင်ဝေရင် အားလုံးခံသာပါသေးတယ်..။
၂-၂၄နာရီမီးပေးဘို့တကယ်လိုတဲ့နေရာတွေကို ပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့်- တကယ်မလိုတဲ့ VIPအစစ်မဟုတ်တော့တဲ့ VIPအတုတွေကို လူ့စည်းဘီလူးစည်းတားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
၃-မီးလိုင်းပိုသွယ်ထားတာတွေ၊ မီးခိုးသုံးထားတာတွေ၊ အပါအ၀င် မသမာမှု့တွေကိုလဲ ရပ်တန်းက (အချိန်မီ) ရပ်ကြဖို့လိုပါပြီ။ (မရှိဘူးလို့လာငြင်းရင်တော့ ကျုပ်က စာရင်းနဲ့ကို တင်လိုက်ဦးမှာ)
၄-ဒီလိုမီးမလောက်တဲ့ကာလမျိုးမှာ မပဒုမ္မာပြောသလို ကိုယ့်အသိတရားလေးနဲ့ကိုယ် မီးလေးချွေတာသုံးကြသင့်ပါပြီ။ အဲဒါထက် အလှဆင်မီးတွေ ဆိုင်းဘုတ်မီးတွေလိုမျိုး အပိုအလျှံသုံးထားတာလေးတွေလဲ ရပ်ထားသင့်ပါပြီ။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မီးထွန်းထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပြချင်တယ်..။
၅- ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်တဲ့စံနစ်တွေ ၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့စံနစ်တွေကို အသေအချာ ပြန်သုံးသပ်သင့်ပါပြီ။
အဲလိုသုံးသပ်ရာမှာလဲ နိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီအနေအထားတွေ နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေး အနေအထားတွေပါ ထည့်တွက်သုံးသပ်သင့်တာပါ။ ဗုံးခွဲခံရတိုင်း မီးပြတ်ရရင် အဲဒီနိုင်ငံ ဘာသွားလုပ်လို့ရတော့မှာလဲ။ မီးလူကြီးတွေက မသုံးသပ်ရင်လဲ ပြည်သူက သုံးသပ်ဖို့ပါပဲ။ သူတို့ကို ပြည်သူကချည်း အသိပညာပြန်ပေးနေရတာ မဆန်းတော့ပါဘူးနော..။
၆-ကျုပ်တို့နိုင်ငံ လူတန်းစေ့ချင်ရင် လိုအပ်တဲ့လျှပ်စစ်က သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ မဂ္ဂါဝပ် ၁၈၅၀ မဟုတ်ပါဘူး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော.. အနဲဆုံး အဲဒါရဲ့လေးငါးဆပါ။ နောက်မျိုးဆက် လူနဲ့တူချင်ရင် အဲဒါကို မဖြစ်မနေရအောင်လုပ်ရမှာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါ..။
စနစ်တကျ လုပ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုတောင် နည်းနည်း အဆင်ပြေလာပြီတဲ့။ အစောကတည်းက အဲလိုဘာလို့ မလုပ်လဲမသိ၊ အလကား တိုင်းပြည်နံမယ် ပျက်အောင်လုပ်တယ်၊ ပြောမှသိ ထိမှနာ ဆိုတာလို ဖြစ်နေပြီကော။